Gbasara Anyị - Tianjin Honest Tech. Co., Ltd.
Tianjin Honest Tech. Co., Ltd. e guzobere na 2014, nke bụ ọkachamara emeputa na ekspootu nke na-eche banyere imewe, mmepe na mmepụta nke AH PR nchedo, TOWELS na Ikanam LIGHT. Anyị dị na Tianjin, nke bụ otu ọdụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu dị n’ebe ugwu China. Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dị iche iche n'ụwa niile. Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na magburu onwe ya mma akara nile nkebi nke mmepụta-enyere anyị aka-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju.
N'ime afọ ole na ole gara aga nke mmepụta na njikwa na nyocha, Honest guzobere usoro njikwa mma ya. Ime ihe n'eziokwu kemgbe ọtụtụ afọ agbasoro "itinye mmadụ n'elu, iji mesoo ndị mmadụ eziokwu" ebumnuche azụmahịa. Mbọ iji nye gị ngwaahịa dị elu na ọrụ dị mma. Nwee ọkachamara, ndị otu ndị na-ahụ maka njikwa ngwa ọrụ, maka akụkụ na usoro ọ bụla na-anwale na njikwa siri ike.
Dị ka a n'ihi nke anyị elu àgwà ngwaahịa na pụtara ìhè ahịa ọrụ, anyị nwetara a zuru ụwa ọnụ ahịa netwọk na-eru Britain, America, Japan, Germany, Spain, Italy, Sweden, France na Russia, wdg
Ọrụ anyị bụ isi na-ekpuchi nchebe ahụ, akwa nhicha ahụ, na ọkụ ọkụ. Anyị nwere ike inye gị nkwado azụ, nkwado n'úkwù, nkwado ikpere, nkwado nkwonkwo ụkwụ, akwa nhicha ahụ, akwa nhicha ụgbọ ala, ngwa ngwa ntutu ntutu, na ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, wdg Ma ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwaahịa na i nwere mmasị na, biko chere free ịkpọtụrụ anyị, na anyị ga-enwe obi ụtọ inyere.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ga-amasị-atụle a omenala iji, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.